Miresaka momba ny fihaonamben’ny GV ao Tiorkia? Arahabao ny Ivontoeran-bondrompiarahamonina Poseidon Lighthouse! · Global Voices teny Malagasy
Miresaka momba ny fihaonamben'ny GV ao Tiorkia? Arahabao ny Ivontoeran-bondrompiarahamonina Poseidon Lighthouse!
Tetikasan'ny vondrompiarahamonina an-toerana ao Tiorkia!
Voadika ny 21 Oktobra 2019 8:10 GMT
Eny, miseho aty koa ny zavatra tsara!
Akory aby, Ortaç ihany ity, izaho no Toniandahatsoratry ny Lingua Tiorka nanomboka tamin'ny 2014 ary manam-baovao haroso anao avy aty Tiorkia aho.
Efa maherin'ny 2 taona izao no nanombohanay tetikasam-bondrompiarahamonina taty Tiorkia, hanavaozana tilikambo fanilon-tsambo iray, dia ny Poseidon Lighthouse izany. Hita eto ambany ny tantaranay, fa raha mila famintinana haingana ianao, dia afaka mijery ny lahatsarinay izay maharitra 2 minitra mba hahitanao ny mahakasika izany:
Tamin'ny fahavaratry ny taona 2016 no nanomboka ny tantara, rehefa nihaona izahay roa mpianatry ny anjerimanontolo tao Tiorkia, tanatinà tobinà sahan'asa tao Frantsa, tampoka teo dia nahita singa maro mampitovy anay izahay ary nikolo ny finamananay, nandia halavirana maro ary nizara ny fitiavanay ireo tetikasa tao an-toerana any amin'ireo faritra somary mitoka-monina. Nandritra ny dianay manodidina an'i Istanbul, nahita ity morontsiraka mahafinaritra manana loharano mahamay sy vohitra kely amorontsiraka ity izahay, izay manana tantara feno sy tontolo iainana tsy mbola voakitika ihany koa. Nijanona tao izahay ary taty aoriana dia nahazo fifandraisna tamin'ireo manampahefana tao an-toerana ho an'ilay tetikasa.
Taorian'ny fanapahankevitray hanolo-tena ho an'ity tetikasa mahagaga ity, nandany volana maro izahay niezahana hahazo fotoana hihaonana tamin'ny filankevitra tao an-toerana. Taorian'ireo resaka sy ezaka tsy tamby isaina, nahavita nanao fifanarahana tamin'ny filankevitra sy ny ben'ny tanàna tao an-toerana izahay. Hanampy anay amin'ny resaka lalàna ry zareo, hanangona sy hamory fanohanana ary hanome ampahany amin'ireo fandaniana. Niketrika ny fotodrafitrasa izahay, nividy takelaka mitroka ny herin'ny amsoandro izahay ary namory mpirotsaka an-tsitrapo vitsivitsy taorian'ireo volana maro nikarakaràna.
Noho ny fitokana-monin'ilay toerana miaraka aminà zavaboary toy ny any am-paradisa, mandinika ny zavatra rehetra izahay mba hihazonana ny tontolo iainana amin'ny endriny natoraly ary hiara-hiasa amin'ny vondrompiarahamonina ao an-toerana mihitsy mba handraisana anjara anatinà faritra fivelomana maharitra.
Araka ny efa nambaranay teo aloha, nametraka takelaka mitroka ny herin'ny masoandro izahay ary miketrika rafitra fitarihan-drano ho an'ireo loharano sy ny rafitra famatsian-drano ho an'ny vondrompiarahamonina. Ny fotodrafitrasa sy ireo zavatra hafa kosa dia atao manaraka ny lalàna sy ny fahazoandàlana ho an'ireo faritra manana tontolo iainana saropady ao Tiorkia.
Hampiasaina ho toy ny trano fandraisambahiny miaraka amin'ireo fitaovana fototra ilaina toy ny lakozia, efitra fandroana, efitra fatoriana ary efitra malalaka iray io tilikambo io. Ivelan'ny tilikambo hisy toerana filasiana, zaridaina ary faritra kely fanaovana fambolena tsy tapaka. Hampiantrano olona avy amin'ny lafy valon'izao tontolo izao izay te hiaraka hitsidika sy hizara ny soatoaviny, hanampy hitahiry ny tantara, kolontsaina ary ny tontolo iainana izahay.
Nanao izay afakay izahay hanangonana fanohanana bebe kokoa miaraka amin'ny Indiegogo, na dia mbola mila fankatoavana bebe kokoa aza, ary amin'izao fotoana izao, tena mila ny rehetra izahay hihoraka ho anay, hizara ny ataonay, hanatrika anay, ary hanampy mba hanatanterahana io tetikasa io!
Amin'izao fotoana izao, mieritreritra ny fahafahanay mamita io tetikasa io sy mamolavola azy aminà ambaratonga iray ahafahana mampiasa io toerana io ho ivontoeram-bondrompiarahamonina kely toy ny vohitra iray. Iza no mahalala, mety ho lasa Vohitry ny Global Voices iray ny Poseidon Lighthouse indray andro any, ary mety hisy fihaonambe hatao anatin'ity toerana miavaka ity.
Ity ny rohin'ilay tetikasa, tsidiho ary ampahafantaro anay ny hevitrao momba azy!
Ity ny rohin'ny pejy Facebook:
Raha manana sosokevitra an'ireo fomba heverinao fa ahafahanao manampy anay ianao, aza misalasala manatona anay.
Misaotra anao namaky hatramin'ny farany, manantena izahay fa angamba, hitsidika anay ianao indray andro any!
Erdoğan sy ny adin'ny AKP amin'ny zavakanto sy ny kolontsaina
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 6 ora izay
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 2 andro izay
Azia Atsimo 2 andro izay
Faritan'ny governemantan'i Hong Kong ho “fampihorohoroana ataon'amboahaolo mandeha irery” ny fanafihana polisy
Azia Atsinanana 14 Aogositra 2021